Crystal Black Apple Launcher Theme 2.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.2 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း Crystal Black Apple Launcher Theme
Crystal Black Apple Launcher Theme ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နယူး Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုယခုရရှိနိုင်ပါ! အခမဲ့ Crystal Black က Apple ကိုနောက်ခံများနှင့်အိုင်ကွန် Pack ကိုအတူပျော်မွေ့ဖို့ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို Apply! သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစတိုင် Make!
crystal က Black Apple ကဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုလှပသော crystal က Black Apple ကဖွင့်တင် Theme HD ကိုဝေါလ်ပေပါနှင့် crystal က Black Apple ကဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုအိုင်ကွန်ဗူးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်အခမဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင် Theme HD ကို Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုနောက်ခံပုံများနှင့်မိုဘိုင်းဆောင်ပုဒ်ဝါသနာရှင်များအဘို့ဒီဇိုင်းလက်ရာမြောက်သော Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို app ကို icon များနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။ သငျသညျရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အယခု Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါကပိုအံ့သြဖွယ်များစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်!
Come နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်များအတွက် Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နှင့်သင့်ကို Samsung, Huawei HTC နှင့်အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းစတိုင်တခြားအမှတ်တံဆိပ်ပါစေ။
သငျသညျ Crystal Black က Apple ကအဓိကအကြောင်းအရာတင်ပေးသူနှင့်အတူပျော်မွေ့နိုင်သည်
★အေးမြတဲ့ Theme နှင့် HD ကို Wallpaper
•အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကလှပသော themes များနေ့စဉ်နေ့တိုင်း updated
• Crystal Black က Apple ကအဓိကအကြောင်းအရာလူကြိုက်များ apps များအများအပြား HD ကိုစိတ်ကြိုက် Icon များ, လူမှုရေး app ကိုစနစ် app ကို icon များပါဝင်သည်။
• Icons ဆောင်ပုဒ်ရန်သင့် unthemed icon တွေကိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်း
• Dynamic ပြက္ခဒိန် icon တွေကိုထောက်ပံ့
★ 3D EFFECT theme
•သင့် 3D ေူပာင်းလဲရေးသက်ရောက်မှုမှ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို Add
•ထိတွေ့အမူအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုအေးမြနောက်ခံပုံများ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင် Theme ၏ဂုဏ်အသရေခံစားရနိုင်ပါတယ်။
• Crystal Black က Apple ကအဓိကအကြောင်းအရာတင်ပေးသူနှင့်သင်၏ Lock ကိုမျက်နှာပြင်ကိုအလှဆင်
•ထို့အတူလျင်မြန်စွာ Control Panel ထဲကအတူ passcode & Pattern ကို Lock ကို၏တပြင်လုံးကိုကြည့်ကိုပြောင်းလဲ
• themes များ, နောက်ခံပုံများ, app ကို icon များနှင့်နေ့စဉ် updates များကိုများ၏ကွဲပြားခြားနားအမျိုးမျိုး။
•ကျနော်တို့ကခရစ်စမတ်, ချစ်သူများနေ့နှင့်အခြားအားလပ်ရက်င်ရှိမရှိ, ငါတို့သင်နှင့်လူတိုင်းအတွက်တစ်ဆောင်ပုဒ်ရှိပါလိမ့်မယ်, ပွဲလမ်းသဘင်ကာလအတွင်းမှာအထူးဒီဇိုင်းများသည်, ထို့ကြောင့်သင်ကိုချစ်ကြောင်းပွဲလမ်းသဘင်လေထုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
•အတွေ့အကြုံမသက်ဆိုင်သင်အသုံးပြုဘယ်အရာကိုဖုန်းကမော်ဒယ်၏ 3D သက်ရောက်မှုနှင့် HD ကို themes များနှင့်နောက်ခံပုံများအဆင်ပြေချောမွေ့အောင်
နယူး Launcher ကို 2018 အတွက် Crystal Black က Apple ကအဓိကအကြောင်းအရာလျှောက်ထားရန်ကဘယ်လို■?
ဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားရန်, ငါတို့ CMM Launcher ကို 2018 ပထမဦးဆုံး install လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစတိုင် & သဘာဝကအစိမ်း, စနစ်တကျနှင့်အေးမြအောင်ဖို့ Crystal Black က Apple ကအဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကို Apply ။ မူရင်း app ကို icon များ, သင့်ဖုန်းရဲ့နာရီနှင့်ရာသီဥတုဆောင်ပုဒ်ကတော့ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင် Theme ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။ ဒီကင်မရာ app များ, လူမှုရေး apps များ, ဖျော်ဖြေရေး app များအသုံးဝင်သောကိရိယာများနှင့်တမန် apps များပါဝင်သည်, လူကြိုက်များတဲ့ App များအဘို့များစွာသောစိတ်ကြိုက် icon တွေကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုလည်း themes များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကို Google Play စတိုးမှာအခမဲ့နှင့်ရရှိနိုင်သငျသညျပေးပါသည်။ ယခု Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို Download လုပ်ပြီး apply! သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပိုပြီးနဲ့အခြား (က Black, ဦးခေါင်းခွံ Cool) လှပသော themes များရှိပါသည်!
ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးစည်းရုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ယခု Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို Apply ။ မူရင်း app ကို icon များ, သင့်ဖုန်းရဲ့နာရီနှင့်ရာသီဥတုဆောင်ပုဒ်ကတော့ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင် Theme ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း၏ဤ Crystal Black က Apple ကအဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကို 2018 လာ. ပျော်မွေ့။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းရဲ့ပျင်းစရာမျက်နှာပြင်၏ပြီးသားပင်ပန်းရှိပါက, ဒီ Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုပျော်မွေ့ကျေးဇူးပြုပြီး!
သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင် => Crystal Black က Apple ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို rating ကိုစဉ်းစားပါနဲ့။ ဒါဟာအခမဲ့နောက်ထပ်အပြင်အဆင်များပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းပါသည်။
Crystal Black Apple Launcher Theme အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Crystal Black Apple Launcher Theme အား အခ်က္ျပပါ
jerold-taylor စတိုး 131 66.3k
Crystal Black Apple Launcher Theme ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Crystal Black Apple Launcher Theme အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.2
ထုတ်လုပ်သူ CMM Launcher INC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://cmmlauncher.com/cmm-launcher-theme-privacy-policy/
Release date: 2019-07-05 20:19:44
လက်မှတ် SHA1: 71:62:35:88:27:46:C2:FB:63:E4:1F:30:2E:FC:F4:AC:0C:E0:9C:5C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): abhishek garg
အဖွဲ့အစည်း (O): CMM Launcher INC
နယ်မြေ (L): Modinagar
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Uttar Pradesh
Crystal Black Apple Launcher Theme APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ